Dran dia nantsoina ho "Banksy" frantsay miaraka amin'ny tsikera sosialiny | Famoronana an-tserasera
El ny zavakanto an-tanàn-dehibe no an'ny fikomiana, ho an'ny fitsikerana ara-tsosialy ary hanehoana tsy fankasitrahana izay heverina ho "mahazatra". Ny fisainana fitsikerana dia mitady ireo toerana izay hanehoana ny tsy fitiavana mandray vahiny rehetra izay mitaky ny mahazatra.
Dran dia mpanakanto an-tanàn-dehibe frantsay izay tia fatratra hampiasa ny kanto ho fomba hikomiana ary manaova fanakianana ara-tsosialy lehibe amin'ny fiainana maoderina ankehitriny; amin'ny alàlan'ny habaka mitovy ihany koa ity artista alemanina ity.
Saingy nandeha teny amin'ny arabe i Dran asehoy amin'ny graffiti ny tsy fankasitrahanao. Ireo izay kendrena matetika amin'ny "fanimbana" ny tontolo an-tanàn-dehibe izay nahazatra azy, ary izay heverina ho "mahazatra".
Ho an'i Dran maro Antsoin'izy ireo hoe 'French Banksy' noho ny fanehoana an'io fomba fijery samihafa io izay mampiasa ny abstract sy fomba iray hafa anehoana sary an-tsaina izay rehetra manodidina antsika. Io fomba fijery io izay tsy tratrantsika matetika, izay manokatra ny masontsika amin'ny endrika hafa.
Ny maha-zava-dehibe ny zavakanto an-tanàn-dehibe miaraka amin'i Tsy matahotra ny fitsikerana ara-tsosialy ary afaka maneho taratra ireo toe-javatra tsy ara-drariny rehetra. Dran dia manana sary maivana ary ny hafatra dia manandanja kokoa noho ny teknika; na dia tsy manadino an'io koa izy ary ny asany dia azo jerena tsara avy eo.
Ny fahalalana ny fomba fampitana hafatra mampiseho ny tsy marina ary ny fihatsarambelatsihin'ny fiarahamonina izay mandefa rindrina mba diovina, fa mamela olona tsy manam-potoana hatoriana ho ilaozana. Hain'i Dran ny milalao tsara ny hafany rehetra ary mahay manazava izany amin'ny fomba tsara indrindra.
Izy koa dia manao fitsikerana ny zavakanto izay tsy tadiavina na inona na inona mihoatra ny varotra canvas izay misy andiana akrilika, menaka na rano mitete tsotra izao.
Anananao ny azy tranonkala for araho ny asany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Dran, mpanakanto an-dalambe antsoin'izy ireo hoe 'French Banksy'
Mianatra manao GIF amin'ny Photoshop izahay